Tae-kwon-do WT: niofana momba ny “poomse” ny ankizy 60 | NewsMada
Tae-kwon-do WT: niofana momba ny “poomse” ny ankizy 60
Tao anatin’ny fahavitrihana no niatrehan’ireo mpanao tae-kwon-do WT ny fiofanana nomen’ny Me Nicolas de Gonzague, omaly. Nisantarana izany ireo teknika fototra eo amin’ny “poomse”.
Nanomboka omaly alarobia, etsy amin’ny efitranokelin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ilay fiofanana eo amin’ny tae-kwon-do WT. Fizarana traikefa omen-dRandriamiandrisoa Nicolas de Gonzague, 5 è dan kukkiwon mondial. Nisantarana io andro voalohany io ny teknika fototra niainga amin’ny «poomse» na ny fihetsika mirindra.
Nanaraka izany ny ankizy 60 mianadahy avy amin’ireo klioba maro ao anatin’ny ligin’Analamanga. Tao ireo efa ao anaty ekipam-pirenena, nisy koa nefa ireo vao niatrika fiofanana. Nifantohan’ny fiofanana ny fanitsiana ny fihetsiky ny tanana sy ny tongotra ary ny vatana, rehefa manao “poomse”, mandritra ny fifaninanana. Teo koa ny fanomezana ireo lesona vaovao. Ny «poomse» laharana 1 ka hatramin’ny 8 no nianarana sy nahitsy. “Tena faly be aho satria mahay ary mandray vetivety ireo ankizy. Tsy nampoiziko mihitsy ny lentan’izy ireo. Tsy nanano sarotra mihitsy ny nampita ireo teknika vaovao”, hoy i Nicolas.
Nisy ny fampiharana sy sedra nampanaovina ireo ankizy, ny tapak’andro hariva, nitarafana raha tena voarain’izy ireo tsara ny zavatra nampitaina aminy.
Zava-dehibe ny lafiny fitsarana
Hitohy amin’ity alakamisy ity ny fiofanana ka atao indray ny lafiny fitsarana ny ady “kyorugui”. Natokana ho an’ireo mpitsara sy ireo “maître de salle” izy ity. Ny fihetsika atao rehefa mitsara ny “kyorugui” sy ny feo avoaka no homena amin’ity. “Matetika, hamaivanin’ny olona ny lafiny fitsarana nefa tena ain-dehiben’ny tae-kwon-do. Zava-dehibe, ny fahaizana mitsara ny adin’ny mpifaninana, indrindra amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Misy ny fihetsika mila ianarana sy fehezina, manoloana izany, miaraka amin’ny teny atao”, araka ny nambaran’ny Me Nicolas.
Hamaranana ny fiofanana, rahampitso zoma, ny “passage de grade” ka hiatrika izany ireo manana fehinkibo mena haka ny fehinkibo mainty.
Aorian’io, hozaraina ny taratasy fanamarinana ireo mpiofana rehetra nanaraka izany, nandritra ny hateloana.